अब कि वारका वार, पारका पार हुन्छ ! | परिसंवाद
गफाष्टक	 आइतबार, असार २१, २०७७ मा प्रकाशित
ए डोल्मा ! बाहिर हेर त लाक्पा पो आए छ । होइन हौ लाक्पा काठमाण्डौ तिर थिइस् होइन ! कहिले आइस् !
हिजो बेल्का आई पुगेको हौ भेना !
यसो दिदी–भेनालाई भेटेर आउँछु भनेर यता उक्लेको ! अनि मैले दुई वर्ष अघि तपाईकोमा पठाको भेडाहरुको खबर के छ ?
भन्नु मात्रै र’छ लाक्पा ! बथानसंग मिलेर बस्नै सकेन । एउटै खोर, एउटै चरन, एउटै टाट्नो भर के गर्नु ! तैंले देको खिनौटे, मरनच्याँसे सानो झुण्ड पनि मै हुँ भन्ने क्या। चरीचरन हाम्रो मात्र हो भने जस्तो गर्ने। अर्को ठूलो झुण्ड चैं ‘हाम्रो झुण्डमा मिल्न आउने अनि ल्याइतेले विउँ खोज्ने’ भने जस्तो गर्ने।
लु…! बिताए छ । ठ्याक्कै नेकपा जस्तै भएछ । हैन अनि कहिले देखि यसरी हानाहान गर्न थालेका भेना ।
यो खोरमा हुलेकै दिनदेखि सुरु गरी हाले नि ! छोड्दे यस्ता भेडाका कुरा ! बरु काठमाडांैमा के–के हुँदैछ भन् न । कोरोना, चुच्चे नक्सा, प्रधानमन्त्री हटाउने कुरा, लिम्पियाधुरा, प्रचण्ड बबुरा, सलहको झुण्ड जस्ता खबर भन् न । अनि हाम्रा नेताले पार्टी नफुटाको धेरै टाइम भैसक्यो । यसपालि त वारका वार, पारका पार गर्छन् कि !
अस्ति नै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भारत र आफ्नै पार्टीका नेता मिलेर सरकार ढाल्न खोज्दै छन्’ भने । तर, हाम्रो कमरोड प्रचण्डले ‘भारतले होइन, यो सरकार मैले ढाल्न खोजेको’ भनेर दह्रो जवाफ दिनु भयो । त्यसपछि भारतलाई गाली गर्ने, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्ने र चुच्चे नक्सा पास गरेको राम्रो हो भन्नेहरु त ट्वाँ परेर हेरेको हेरै ।
हँ…! त्यसो नभनेको भा हुन्थ्यो । पहिला नाकाबन्दी भारतले लगाएको होइन, हामीले लगाएको हो भन्नेहर्लाई नेपाली जनताले लोप्पा खुवाएको बिर्सेछन् कि क्या हो ।
कोरोना फैलदो अवस्थामा छ । रोकथामका उपाय पनि हुँदैछन् । चुच्चे नक्सा बारेमा एकता देखिए पनि प्रधानमन्त्री ओलिलाई भने त्यही नक्साको चुच्चोले घोचेर थिलथिलो बनाएको छ । भारतको पक्षमा अहिले जो दह्रोसँग उभिन्छ, उही प्रधानमन्त्री बन्छ भने जसरी हाम्रा नेताहरु ज्यान फालेर लागेका छन् । अहिले कुनै पनि हालतमा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा गराउने भनेर हाम्रो नेताहरु जोड्ले लागेको छ ।
हैट…! लाक्पा ! हाम्रो भेडा जस्तै भए छ नि हौ जुधेको जुध्यै ! डाम्नालाई जङ्गल तिर छोडी दिनु पर्छ अनि हुँडारले त्यसको चोक्टा लुछ्छ !
भेना ! सिंगारी पनि हरायो चितुवा पनि करायो भैरा’को छ ! काठमाण्डौको राजनीति निको छैन । यही हाम्रो उपल्लो डोल्पाका जनताको जति पनि त्यहाँका नेताहर्को बुद्धि छैन कि क्या हो जस्तो लाग्न थाल्यो मलाई त !
घैमलहरु भेला पारेपछि त्यस्तै हो लाक्पा ! रित्तो भाँडाहरु ठोकिएर बज्छ । सैद्धान्तिक, वैचारिक लडाई होइन, कुर्सीको लडाईं यस्तै हो!
कस्को कुर्सीको लडाईं हँ ! ऐ लाक्पा तेरो भेनाले कल्लाई भनेको ?
ल हेर यो झुम्री कुरै नबुझी कराउँ छे ।
डोल्मा दिदी ! प्रचण्डलाई कुर्सी चाइयो अनि झगडा गरेको भन्ने घोर दक्षिणपन्थी विचार छ क्या भेनाको !
अनि के ओलीलाई मात्र प्रधानमन्त्री मान्नु पर्ने । हाम्रो प्रचण्ड कामरेडले कति जनालाई प्रधानमन्त्री मान्नु पर्ने हँ ! सबैभन्दा ठूलो नेता चै हरेक थोकलाई प्रधानमन्त्री मानेर बस्न सुहाँउदै सुहाउँदैन । उच्च छलाङ लगाएर भए पनि त्यो कुर्सीमा सर्वहारा वर्गका महान नेता हाम्रो प्रचण्ड कामरेड बस्नै पर्छ ।
झुम्री अब प्रचण्ड कामरेडको पालो त अर्को जुनीमा मात्र होला ! चुनाव हुन्छ चुनावमा जनताले पत्याउनु पर्छ । भारतले पत्याएर मात्र हुदैन । सधैं देवी ज्ञवाली जस्ता मात्रै प्रतिद्वन्दी पाइँदैनन् । र जनताले विश्वास गर्दैनन् । बड्के नेतामा अबको चुनाव देउवा र ओलीलाई मात्र फाप्ने देखिन्छ ।
तिमीले भनेर हुन्छ ! जनता सबै प्रचण्डका पक्षमा छन् ।
ल हेर लाक्पा तेरी दिदी त्यसै जङ्गिन्छे । अब बाँदरमुडेका जनताले मात्र पत्याउँछन् भन्यो भने झन् आगो हुन्छे ।
भेना ! हिजो स्थायी समितिको बैठक स्थगित भयो । बैठक फेरि बस्छ होला । बसेन भने पनि अब वारका वार हुन्छ, पारका पार हुन्छ । त्यसपछि दुई चार महिना कोठे खुराफात उमारेर बाँड्न थाल्छन् । अनि फेरि घम्साघम्सी हुन्छ । अर्को चुनावसम्म यस्तै हो ।
ठीक भनिस ! त्यसपछी अर्कै माहोल बन्छ यी मूला टकनटाट । भुपु ठूला बडा भर बस्छन् । कि कसो !
हो भेना !
के ! हो भन्छस् ! प्रचण्ड कामरेड त्यसै चुपो लागेर बस्नु हुन्छ भन्ने लागेको छ ! छोरी – ज्वाईँहरु छन्, बुहारी छिन्, भाइ–भतिजा छन्, धनी मानी ठेकेदार, ब्यापारी छन् । यी सप मिलेर प्रचण्ड कामरेडलाई लक्षमा पु¥याएरै छोड्छन् । तिमार्ले भनेर हुन्छ ! विनवित्थाको कुरा गरेर बस्छन् ।
हेर लाक्पा पार्टीमा रसायन मिलेन अप्राकृतिक जस्तो एकता भयो । आ–आफ्नो चुलो चौको समाल्दै ठिक हुन्थ्यो । एमाले ठूलो पार्टी भै हाल्थ्यो, माओवादी तेस्रो–चौथो भै हाल्थ्यो । आखिर यी सबैले गर्ने भनेको जनताको सेवा न हो । त्यो त सबैले गरेरै देखाई हाले नि !
हो त्यो त, छर्लङ्गै देखाई दिए भेना!